ညိုထက်(လမ်းသစ်ဦး) – လေးဦးဂိုဏ်း | MoeMaKa Burmese News & Media
ဆောင်းယွန်းလ - ကိုယ့်လမင်းအကြောင်း
ညိုထက်(လမ်းသစ်ဦး) – လေးဦးဂိုဏ်း
အဲ့ဒီနေရာထဲ ဂျက်ဇ်ဂီတ ရှိတယ်
ကျနော် ဂျက်ဇ်ဂီတကို ဂွင်ဖန်နေတယ်
ငါ နင့်ရဲ့ ဖုန်းခေါ်သံကို အမြဲနားစွင့်နေတယ်
လူကြီးမင်းမ ခေါ်ဆိုမည့် ဖုန်းသည် အမြဲတမ်း ဖွင့်ထားသည် ….
အတာရေက ငါ့ရဲ့အား ငါ့ကိုရေလောင်းဦး လခြမ်းလေး
တဘဝလုံး ပုံအောပေးထားတဲ့ အချစ်တွေနဲ့ လင်းပ
ယင်နဲ့ တောက်ရဲ့ အချစ်ဇာတ် စလိုက်ကြရအောင် ….
မိုးကြိုမုန်တိုင်းတွေကို ဖြတ်သန်းပြီး အသက်ဆီကို လာနေတယ်
တို့အတူ ဦးပြုံးချိုလမ်းက ခရေပန်းတွေကောက်ချင်တယ်
သုံညကို တူးဖော်လိုက်တဲ့အခါ ခင်လေးက ပြုံးနေတော့တယ်
ချစ်တယ် ခင်လေးရယ် ….
နေနဲ့ လနဲ့ နှစ်ပါးဆိုင် သကြားကိုယ်တိုင်မမယ့်ယောက်ကျား
ဇာတ်မင်းသားလေးသိန်းဇော် အထာနဲ့ ပန်းစည်းလေးကိုင်ပြီး အချစ်ဆီကိုလာခဲ့တယ်
ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးစာအုပ်ဆီကို အရောက်လာနေတဲ့ သဘောပေါ့
လူသိရှင်ကြား အမြောက်သံတွေပေးပြီး အချစ်ဆီကို လာခဲ့တယ်
ဒီမိုကရက်တစ် တိုင်းချစ် ပြည်ချစ်ဝါဒကို ကိုင်ထား
ကျုံးဘေးနားက ကန်စွန်းခင်းထဲ (ဒါမှမဟုတ်)
ဆံတုံးတော် အမို့မောက်နဲ့ ကျောင်းသမ
အဲ့ဒီ ကရင်နီမလေးရဲ့ ပေါင်တံတွေက လှတယ် ….
အချစ်ရေ …. (ဒါမှမဟုတ်)
မိုးတွေသဲတဲ့နေ့ မေဝဿန်လာလိမ့်မယ် ….
(နေလ က ကြွေကျနေတဲ့ ကောင်မဟုတ်)
ချစ်ခြင်းမေတ္တာ အမှန်တရား ကံကြမ္မာမျက်နှာသာပေးလိမ့်မယ် ….
(ဘုရားသခင်သည် ချစ်ခြင်းမေတ္တာ ဖြစ်၏)
ချင်းနင်း ဝင်ရောက်နေတော့တယ် ….
၂၆ – ၁၁ – ၂၀၁၆
Tags: ညိုထက် (လမ်းသစ်ဦး)
ညိုထက် (လမ်းသစ်ဦး) ● နိုင်ငံရေးကဗျာ (0)
ညိုထက် (လမ်းသစ်ဦး) ● မေလ (0)
ညိုထက် (လမ်းသစ်ဦး) ● ဒီကနေ့ မှတ်တမ်း (0)
ညိုထက် (လမ်းသစ်ဦး) ● ကွဲလွဲရင်း ပေါင်းစည်း (0)
ညိုထက် (လမ်းသစ်ဦး) ● ကျနော်နဲ့ ကဗျာရွတ်ဆိုခြင်း (0)